के Altai एउटा यात्रा भन्दा बढी रोचक र रोमाञ्चक हुन सक्छ? मास्को टाढा स्थित, Altai यसको धन प्रकृति द्वारा सिर्जना संग पर्यटकहरु आकर्षित गर्छ। यो सबै प्राकृतिक क्षेत्र जोडती: steppe त्यसपछि वन-steppe जान्छ, दुर्गम taiga संग पहाड तरिका दिन्छ सुन्दर दृश्यहरु। क्षेत्र को क्षेत्र मा कम्तिमा एक दृश्य संग पानी धेरै फरक शरीर को एक धेरै छ। सबैभन्दा रोचक शहर को एक यहाँ भ्रमण गर्न Biysk छ। यसलाई यो लेखमा छलफल गरिनेछ। शहर, यात्रा संग्रहालयहरु Biysk को इतिहास थाह गर्नुस्।
Altai मा आराम
यो जलवायु, को Altai क्षेत्रमा कन्टिनेन्टल छ अप्रत्याशित मौसम संग - गर्मी सधैं न्यानो छ, तर जाडो महिनामा धेरै कठोर छन्। Altai छुट्टी धेरै फरक हुन सक्छ। पर्यटक यात्राहरु पहाड नदी मा र्याफ्टिङ र अधिक सङ्गठित छन्, धेरै गुफाहरु जाँदै जोखिमपूर्ण खेल प्रशंसक लागि, किनारा मा प्रदान गरिन्छ।
देश को यो सुरम्य कुनामा गएर, तपाईं शहर Biysk, को Altai क्षेत्र को दक्षिण-पूर्वी भाग मा स्थित छ जो भ्रमण गर्नु पर्छ।
Biisk र यसको इतिहास
Biysk शहर पत्रुस गढ रूपमा महान् द्वारा अठारौँ शताब्दीमा स्थापित, र एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए। यो दोस्रो ठूलो र क्षेत्रमा सबैभन्दा पुरानो बन्दोबस्त छ। शहर Biisk सबैभन्दा सुन्दर नदी को एक को बैंकहरू मा स्थित छ - Bie।
उहाँले लामो आफ्नो tercentenary मनाइन्छ र रूस को ऐतिहासिक शहर को संघ मा राजमद लिन्छ छ। आज यो प्रमुख औद्योगिक केन्द्र हो, यो अत्यधिक सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरु, विज्ञान र शिक्षा को एक उच्च स्तर विकास भएको छ। Biisk वास्तुकला, पुरातत्व र प्रकृति को स्मारक मा ऐतिहासिक धनी। र उहाँले रोचक र असामान्य उल्लेखनीय स्थानहरू ज्ञात छ।
Biysk आकर्षण आनन्द कारण। "काला तीर" नाम एक वाष्प इन्जिन, स्टेशन मा तपाईं पूरा हुनेछ जो - पहिलो कुरा आगंतुकों शहर हेर्न हुनेछ। यो लेखक Vasily Shukshin आफ्नो नाम धन्यवाद पायो। ठूलो आकार रेल - यो छापिएको छ जो बिल्डर्स एउटा आदर साइबेरियन रेलवे। वास्तु सिर्जना एक प्रकारको को रेलवे स्टेशन को निर्माण छ, जो खोल्ने शहर को लागि एक महत्वपूर्ण घटना थियो।
सम्राट गर्न स्मारक - यो रोचक आकर्षण को एक कांस्य Horseman छ पत्रुस महान्। एक स्मारक सेन्ट पीटर्सबर्ग देखि बच र Garkavi पार्क मा एक आरामदायक ठाँउ भेट्टाएको कि छाप हुन्छ। शहर Biysk, Altai क्षेत्र - तेस्रो गाउँ, त्यहाँ ठूलो सम्राट एउटा स्मारक छ जहाँ।
लेनिन सडक मा जो अहिले स्थानीय lore को संग्रहालय घरहरुमा Assanova हवेली छ। तपाईं एक पटक यो देशमा जीवित, दैनिक जीवनको वस्तुहरू र विभिन्न समयमा को निवासी जीवनमा देख्न सक्छौं। एक संग्रह संसारको धेरै संग्रहालयहरु को ईर्ष्या - संग्रहालय बारेमा एक सय र चालीस हजार प्रदर्शन छ। यहाँ तपाईं ऐतिहासिक कलाकृतिहरू पाउन सक्नुहुन्छ केही जो फिर्ता सत्रौँ शताब्दीमा गर्न मिति दुर्लभ किताबहरु हेर्न। यो रहस्यमय sarcophagus, हतियार पुर्खाहरूको, अनौठो उपकरणहरू Altai shamans, बौद्ध मूर्तिहरु, प्राचीन घडी र samovars हेर्न रोचक हुनेछ। भावना कला नोव्यू द्वारा सिर्जना गरिएको भवन नै छ।
व्यापारी Firsov को खण्ड
Biysk लायक देखेर ठाँउहरु अरू के छ? पर्यटकहरु व्यापारी Firsov को खण्ड आकर्षित गर्छ। यो सबै भन्दा ठूलो भवन व्यापार, eclecticism को रूप मा सिर्जना, मनसायलाई संग intertwined छ आधुनिक शैली। शहर को एउटा ऐतिहासिक कुनामा स्थित छ निर्माण, पनि क्रान्तिको अघि, पुनर्निर्माण Firsov, त्यसपछि व्यापारी। सुन्दर भवनहरु सुविधाहरु किनमेल गर्दै भित्र निर्माण अन्य व्यापारी भवन तुलनामा धेरै अनुकूल देखिन्छ।
Biysk मा आकर्षण समावेश spouses स्मारक - सेन्ट पत्रुस र Murom को Fevronia। जोडी अनन्त प्रेम, वफादारी र दीर्घायु को एक प्रतीक भयो। यो तिनीहरूले, असामान्य जादुई प्रेम थियो कि विश्वास छ। एक हजार नौ सय सत्रौँ वर्ष रूसी साम्राज्य बासिन्दाहरू परिवार छुट्टी मनाइन्छ अप, उहाँले पछि भूल भएको थियो, तर अब दोस्रो जीवन फेला भएको छ, र जुलाई को आठौं, तपाईं सुरक्षित तरिकाले-गर्दा अनि आफ्नो परिवारको बलियो प्रेम लागि रक्सी एक गिलास हुर्काउन सक्छन्।
शहर Biysk, Altai क्षेत्र यसको आफ्नै दन्त्यकथा छ। तिनीहरूलाई को एक सम्बन्धित छ को ओब नदी, पानी Biya र Katun देखि स्रोत जो। दुई नदीहरूको पानी फरक रंग छ र धेरै किलोमिटरसम्म तिनीहरूले मिश्रण बिना प्रवाह आफ्नो Kohler बताए। शताब्दीयौंदेखि लागि आदिवासीहरूले पूजा जो मूर्ति, - इतिहासकारहरूले पवित्र बासस्थान "स्वर्ण बाबा" यी ठाउँमा स्थित थियो दाबी गर्छन्। सबैभन्दा लामो नदी रूस मा (पाँच अधिक हजार किलोमिटर) - राम्रो, यो ओब कि टिप्पण लायक छ।
अचम्मको ल्यान्डमार्क एक तारा छ। आफ्नो Entertaining वयस्क र बच्चाहरु दुवै जानुहोस्। यसलाई त्यहाँ जो Biisk अन्तरिक्ष यात्री दिनुभयो एक मोडेल Zeiss तारा छ, कि यहाँ छ। समयमा, उनको Cosmonauts ताराहरू बीच खुला ठाउँ मा सार्न सिके। यो मोडेल उपयोग, पर्यटकहरु हाम्रो आकाश मा छ हजार तारा हेर्दै छ अन्तरिक्ष यान को उचाइ, र सबै भन्दा रमाइलो देखि हुनत हाम्रो ग्रह मा हेर्न सक्नेछन्।
शहर को हाइलाइट
Biysk को धारणा गिरजाघर, आफ्नो सुन्दर frontage, उत्कृष्ट वास्तुकला डिजाइन र चर्च को सुरुचिपूर्ण र अद्वितीय भित्री लामो समय आगन्तुक लागि सम्झना गरिनेछ शहर को एउटा पुरानो भाग संग सजाया छ जो एक उज्ज्वल मोती छ।
गिरजाघर - यो महान शहर को मुख्य स्थानहरूको एक, रूसी-Byzantine शैली मा स्थापित। मन्दिरमा एक धनी इतिहास छ। उसलाई त्यहाँ एक पटक एक चर्च स्कूल, इलाकाका स्कूल थियो। गिरजाघर र बिसवां र अन्तिम शताब्दीको thirties मा चर्च मा प्रबन्ध मिलाइयो जो सतावट, बाँचे। केही सेवकहरू, दमित थिए चर्च बन्द भएको थियो, तर, यो बाबजुद धारणा गिरजाघर सबै कठिनाइ अनुभव भएको छ, र आज आफ्नो ढोका सधैं अनुयायीहरूले लागि खुला छन्।
सबै आकर्षण Biysk असम्भव सूची, वर्षौंदेखि छ जो चासो यो शहर इतिहास को पूर्ण, हरेक कुनामा मात्र बढ्छ। सडकमा मार्फत यात्रा, तपाईं आफ्नो सौन्दर्य र unusualness मा आश्चर्य गर्न बन्द छैन।
हवाई अड्डा, क्रोएशिया: इतिहास स्वर्गीय सीटें र विभाजन को eponymous शहर
आगंतुकों छुट्टी हाउस "सनी" (अब्खाजिया) स्वागत
मास्को को केन्द्र मा स्थित मेट्रो, - स्टेशन "क्रान्ति वर्ग"
आफ्नै हात, कागज, प्राकृतिक सामाग्री, मुद्दा, माटो संग "चरा" Hack
क्याफे "पर्खालले घेरिएको शहर" (Kronstadt, सेन्ट पीटर्सबर्ग): सिंहावलोकन, मेनु र समीक्षा
Klavdiya Korshunova: अभिनेत्री को Filmography र जीवनी (फोटो)
कसरी "Maynkraft" मा फलामको बार बनाउन: बयान
त्रुटि कोड र समस्या निवारण: मृत्यु को नीलो पर्दा